भव्य को प्रार्थना। ? संरक्षण र प्रिन्ट को लागी | + शक्तिशाली
भव्य को प्रार्थनाकेहि केसहरूमा यसलाई पनि भनिन्छ, म्याग्निफिसिएन्ट प्रार्थना भनेको प्रार्थना भन्दा बढी हो, यो गाउँ वर्जिन मरियमले आफैंले व्याख्या गरेको थियो र जसमा सर्वशक्तिमान ईश्वरको महानता उच्च छ।
हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टकी आमा कुमारी मरियमले परमेश्वरको शक्ति र आश्चर्यकर्म देखेकी थिइन जब उनी परमेश्वरको पवित्र आत्माको काम र अनुग्रहले गर्भवती भइन्, हामी यसलाई पवित्र धर्मशास्त्रमा देख्छौं।
येशूकी आमा हुनु भनेको इसाई विश्वासमा विश्वास गर्ने सबैको आमा बन्नुभयो, यस कारणले गर्दा यो विशेष प्रार्थना इसाई मानिसहरू माझ अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
1 मूल भव्य को प्रार्थना
2 ल्याटिनमा सुरक्षाको लागि भव्यताको प्रार्थना
2.1 प्रिन्ट गर्न प्रार्थना
2.2 भव्यको प्रार्थना के हो?
2.3 यस कुमारीको लागि यो प्रार्थनाको उत्पत्ति के हो?
2.4 म कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
मूल भव्य को प्रार्थना
मेरो प्राणलाई परमप्रभुमा महिमा दिनुहोस् र मेरो मुक्तिदाता, भगवानको भलाईको सम्झना गर्दा मेरो आत्मा आनन्दले भरियो।
किनभने उसले आफ्नो नम्र दासलाई हेरेको छ र यसको कारण यहाँ छ किनभने तिनीहरूले मलाई सबै पुस्ताका लागि खुशी र खुशी बनाउनेछन्।
यो मेरो पक्षमा, ठूलो र अद्भुत कुराहरू मा गरेको छ रूपमा उहाँले सर्वशक्तिमान र कता हो कता पवित्र नाम जसको कृपा उहाँको भय गर्ने सबै पुस्ता देखि पुस्ता छ, छ।
उहाँले आफ्नो शक्तिको बाहुबल बढाउनु भयो, र घमण्डीहरूको घमण्डलाई हटाउनु भयो, आफ्ना डिजाइनहरू विफल पार्नुभयो।
उसले शक्तिशालीलाई हटायो र नम्रहरूलाई उठायो।
उनले खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई सामानहरू दिए र धनीले कुनै कुरा बिना नै छोडे।
उहाँले आफ्नो महान् कृपा र दया को लागि उसलाई उहाँ सम्झनुहुन्छ इजरायल आफ्नो सेवक extolled।
जसरी उसले हाम्रा पिता अब्राहाम र उनका सबै सन्तानलाई सदासर्वदाको लागि प्रतिज्ञा गरेको थियो।
मूल म्याग्निफ्याट वा म्याग्निफाटको प्रार्थना शक्तिशाली छ र कुनै पनि समय वा परिस्थितिमा उत्पन्न हुन सक्छ जुन उठ्छ।
त्यहाँ कतिपयले यस प्रार्थनाको बीचमा सुन्दर चमत्कारहरू अनुभव गरेका हुन्छन्, विश्वासको वृद्धि हो, यो प्राय: आउँदो चमत्कार हो जुन हामीले आफूभित्र महसुस गर्न सक्दछौं।
यो वाक्य मूल भाषामा गर्न सकिन्छ जुन ल्याटिन हो, वा कुनै पनि भाषामा यसको विभिन्न अनुवादमा।
ल्याटिनमा सुरक्षाको लागि भव्यताको प्रार्थना
म्याग्निफिकट एनिमिया मी डोमिनम,
Deo salutari meo मा रमाईलो गर्दै आत्मा,
Quia respexit humilitatem ancillae suae।
एक्से एनआईएम पूर्व हरु पिटामले मलाई सबै पुस्ता भन्दै,
quia fecit मंगना qui potens est,
र नाम नाम eius,
एट दयालु ईरस विज्ञापन समय सारिणी ईम।
ब्रेकिओ सुओमा फेकिट पोटेंशिअम,
फैलाउनुहोस् सुपरबास दिमाग कोर्डिस सुई,
शक्तिशाली मुख्यालय जम्मा,
Esurientes बोनस प्रदान,
एट डिवाइट्स डिमिजिट ईनानस।
इजरायल प्यूरम सुम रिकुरेटस मिसेरिकर्डिया सुइस,
अब्राहम र सेमिनार मा हिजोआज हामीसँग मिल्दैन।
शक्ति उपकरणहरू प्रदान गर्न हाम्रो लागि सुरक्षा, परिवार, साथीहरू वा भौतिक सामानहरू जस्तै घरहरू, व्यवसायहरू वा कारहरू।
विश्वासले भरिएको प्रार्थना हामी आक्रमण गर्न चाहेको नकारात्मक सबै बिरूद्ध हाम्रो उत्तम सुरक्षा प्रणाली हुन्छ।
यो शक्ति मापन गर्न गाह्रो छ प्रार्थना को किनकि यो त्यसमा राखिएको विश्वासमा निर्भर गर्दछ, त्यसकारण हामी जान्दछौं कि यस प्रार्थनाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने घटकले विश्वास गर्नु हो।
प्रिन्ट गर्न प्रार्थना
हामीलाई थाहा छ प्रार्थनाहरू सधैं उपलब्ध हुनु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।
यसैले प्रिन्ट गर्नको लागि ऊसँग प्रार्थना छ। तपाईं जब यो र जहाँ तपाईं यो प्रार्थना गर्न प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
भव्यको प्रार्थना के हो?
सुरुमा यो वाक्य इरादा लिएर गरिएको थियो मरियमलाई संसारमा उद्धारकर्ता ल्याउने अनुमति दिएर परमेश्वरको महानताको घोषणा गर्नुहोस्.
वर्तमान समयमा यस प्रार्थनालाई परमेश्वरप्रति कृतज्ञताका साथ बनाइएको छ जुन हामीलाई कठिन क्षणहरूबाट बचाएको थियो, केही आश्चर्यकर्मको निम्ति उसले प्राप्त गरेको थियो र हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने अन्य टोकनहरू।
सुरक्षाको लागि सोध्न प्रयोग गर्न सकिने गीत, चुरोटहरु को लागी, मद्दत, सान्त्वना, विश्वास र आश्चर्यजनक चमत्कारहरू।
प्रत्येक प्रार्थना जस्तै यो शक्तिशाली छ र यो सिर्जना गरिएको छ कि हामी यो क्षणहरूमा यसलाई प्रयोग गर्दछौं जुन हामीलाई यो धेरै आवश्यक छ।
यस कुमारीको लागि यो प्रार्थनाको उत्पत्ति के हो?
एउटै परमेश्वरबाट प्रेरित प्रार्थना वा गीत जुन हामीले पवित्र धर्मशास्त्रमा सजिलैसँग भेट्न सक्दछौं, विशेष गरी सुसमाचारको पुस्तकमा अध्याय १, सेन्ट लूका अनुसार अध्याय १, पद २ 1-२ 26 मा।
ईश्वरप्रति कृतज्ञताले भरिएको पाठ र जहाँ कुमारी मरियमले परमेश्वरको बुबाको महानता र शक्तिलाई चिन्दछन्.
बाइबलीय अंश जहाँ मरियमले हामीलाई सिकाउँछिन् कि परमेश्वरप्रति कृतज्ञताको कमी हुन सक्दैन, यस महान् प्रार्थनाले हामी जान्न सक्छौं कि परमेश्वरका प्रक्रियाहरू, यदि हामीले ती बुझ्दैनौं भने पनि, यसले हाम्रो जीवनमा सँधै आशिष्‌ ल्याउँछ।
साथै मरियम जो विवाह गर्न पर्खिरहेकी थिइन र कामबाट गर्भवती भइन् र पवित्र आत्मालाई धन्यवाद दिइयो, यस्तो कठिन अवस्था जुन उनलाई थाहा थियो कि मुक्तिदातालाई संसारमा ल्याउने जिम्मेवारी र बुद्धिको सामना कसरी गर्ने।
त्यहाँ प्रार्थना गर्ने कुनै दिन वा समय छैन।
तपाईं विश्वास र इच्छा छ जब तपाईं प्रार्थना गर्नै पर्छ। समयले फरक पार्दैन, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रार्थनाको शक्तिमा विश्वास गर्नु हो।
जहिले भर्जिनको शक्तिहरूमा विश्वास गर्नुहोस्। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
म्याग्निफिसन्टको प्रार्थनाको शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। उनी वास्तवमै धेरै शक्तिशाली छिन्!